Home Wararka Will Soomaali ah oo lagu dilay dalka Sweden
Will Soomaali ah oo lagu dilay dalka Sweden
Will Soomaali ah ayaa lagu dilay dalka Sweden. Habeenimadii Isniintu soo galeysay ayaa lagu dilay degmada Hjulsta oo ku taalla Stockholm. Deegaankaan ayaa ah mid ay ugu badan yihiin dadka Soomaaliyeed. Sheekh Xuseen Faarax Xaaji Warsame oo ah imaamka Masjidul Nuur oo Soomaalidu maamusho, kuna yaala xaafada Rinkybay ee Stockholm ayaa idaacada VOA-da u sheegay in wiilkaas oo da’diisu aheyd labaatameeyada dilkiisa loo qabtay dad ku dhow 8 qof.
Dilalka loo gaysto dhalinta Soomaaliyeed ayaa ah kuso u badan kuwa dhex-mara dhalinyarada Soomaaliyeed, oo ayagu u kala qeyb-qeybsan kooxo kooxo, sida uu sheegay. “Habeenkii ay Isniintu soo galeysay ayaa lagu dilay xaafad ay dadka Soomaalidu ku badan yihiin, Ilaahay waxaa uga baryaynaa isaga iyo intii hore ee dhimatayna unaxariisto,” ayuu yiri Sheekh Xuseen Faarax.
Waxa jira da’daalo ay wadaan dowladda iyo ciidamada amonga dalkaas oo wax looga qabtanayo dilalkaas, isagoona xusay inay ka wacyi-geliyaan bulshada Soomaaliyeed sidii ay u xoojin lahaayeen midnimadooda. Horey waxaa dalka Sweden loogu diley dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku dhow 30-meeyo laga soo billaabo 2015-kii, halka ay dhaawacyo kala duwan isku geysteen ku dhawaad Sagaal dhallinyaro.